yekutanga OS 5.1.3 inouya neye nyowani yekuvandudza turu | Linux Vakapindwa muropa
Mwedzi miviri chete yapfuura nhasi, Daniel Fore nechikwata chake yakaburitswa v5.1.2 yeiyo inoshanda sisitimu iyo yavanogadzira ine mhinduro kuSudo bug iyo yakabata akawanda maLinux kugovera. Nezuro Cassidy James Blaede akafara zivisa el yekutanga OS 5.1.3 kuburitswa, chigadziriso chitsva chinouya neshanduko dzinonakidza kupfuura idzo dzakaburitswa Kukadzi apfuura. Pakati pavo, kuvandudzwa kwemashandisirwo akadai seCode, iwo edhita edhita akaisirwa mukugovera uku.
Kune rimwe divi, zvakare zvinonakidza kuti ivo vatangisa maviri maturusi matsva, ese ari maviri ane chekuita nekuvandudzwa. Yekutanga kubata mapakeji, asi iyo yechipiri ichabata kuburitswa kutsva kwesisitimu yekushandisa. Heino runyorwa rweakanyanya kukosha maficha maficha akasvika neyekutanga OS 5.1.3, inoenderera ine kodhi zita raHera.
Pfungwa dzepakutanga OS 5.1.3 Hera
Kugadziridzwa kwemashandisirwo akadai seCode, Sarudzo dzeSystem, desktops uye maneja wefaira.
Maturusi matsva ekugadzirisa mapakeji uye shanduro nyowani dzeanoshanda system.
Yakagadziriswa isingawanze inotonhora uye kupwanya pamafaera.
Fixed Panel Pinning inopindirana nemamwe maratidziro ekuratidzira.
Notifications pasina dhizaini dhata yakatsiviwa ne "Unknown zita" kana "Unknown Artist".
Yakagadziriswa mashandiro uye kudzikisira ndangariro kushandiswa kweDashboard uye zviratidzo.
Mutsva icon «Kubasa».
Mapfupiso ekhibhodi mubato reGala windows.
Yakareba nguva yekudzima yakagadziriswa.
Kubviswa kweiyo yekare Cerbere desktop chinhu.
Mutsva wekuraira mutsara sarudzo -t kuvhura iyo nyowani tebhu
Shanduro nyowani ikozvino iripo semufananidzo we ISO kubva peji repamba peji. Vashandisi varipo vachakwanisa kugadzirisa kune iyo nyowani vhezheni kubva chishandiso chakanyatsogadzirirwa izvi, ndiko kuti, nekuvhura AppCenter nekudzvanya "Gadziridza Zvese".
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » yekutanga OS 5.1.3 inosvika iine nyowani yekuvandudza uye ekuburitsa maturusi
Mhoroi, mubvunzo une "Nguva refu yekudzima yakagadziriswa", iwe unoreva kuti hapana chinotomisa otomatiki kana hibernation mushure mekusaishandisa kwemaminitsi makumi matatu?
Pindura kune qaz
Firefox 75 yakatoburitswa uye idzi ndidzo nhau dzayo uye shanduko